mog - အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: mog
[Maia, 29 သြဂုတ်လ 2019] MOG Technologies က, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာမိတ်ဆက်ယနေ့ဒီနှစ် IBC Show မှာအထူးများ၏တဦးတည်းအဘို့အဆုံးမှအဆုံးသို့ဖြေရှင်းချက်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း။ စံချိန်တင်, စားသုံးမိ, Play စ, Stream, encoding, Transcode နှင့်ဒီကုဒ်ဒါ - - တဲ့ professional ထုတ်လုပ်မှုနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုဂေဟစနစ်အတွက် MAM4PRO အားလုံးမီဒီယာလုပ်ငန်းများစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကွပ်မျက်ဘို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာငါပေးမည် ...
IBC 2019 မှာ MOG
MOG Technologies က, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့ဖြေရှင်းချက်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းခြင်း, RAI အမ်စတာဒမ်မှာ, IBC 2019 မှာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတင်ဆက်ထားပါတယ် 13 စက်တင်ဘာလမှရာအရပျ 17 ယူတဲ 7.A27 လိမ့်မည်။ အဆိုပါအာရုံစိုက် MAM4PRO အတူထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်လာအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည် အသစ်တစ်ခုကို Professional ကမီဒီယာအလှဆင်ဘူတာ; VIZZI အသစ်တိုးမြှင့်မှုများ - အွန်လိုင်း ...
MOG Technologies က, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့ဖြေရှင်းချက်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ယနေ့, ဘရာဇီးအသံလွှင့်စျေးကွက်အတွင်းဦးဆောင် System Integration များထဲမှ lineup အတူလက်တွဲကြေငြာလိုက်သည်။ lineup 28 နှစျကျြောဈေးကွက်ထဲမှာလက်ရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့အာရုံ System Integration, စီမံကိန်းများ, ကုန်ပစ္စည်းတပ်ဆင်ခြင်းများနှင့်အရောင်းနှင့်အသံနှင့်ဗီဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် lineup ...
MOG IBC 2016 မှာထုတ်လုပ်မှု Workflows သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတတ်၏
- တတိယ, MOG, MXF နှင့်ဗဟိုစားသုံးမိပါဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးပါကမည်သည့်ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်. တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ဒိုင်ခွက် data တွေကိုဆည်းပူးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ရိုးရှင်းတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် - ဆန္ဒပြပွဲထုတ်လွှင့်သူတို့၏ထုတ်လုပ်မှုအရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုကျော်တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုရရှိနိုငျပုံကိုပြသပါလိမ့်မယ် ပါတီစနစ်များနှင့်သယံဇာတအသုံးပြုမှုတစ်ခုတည်းနှင့်စုစည်းပလက်ဖောင်းမှတဆင့်။ SKYWATCH အပြည့်အဝရရှိသည် ...
MOG နေဖြင့်ပထမဦးစွာ RTP က်ဘ်360ºဂီယာလုပ်ဆောင်
MOG Technologies က, ဗဟိုစားသုံးမိဖြေရှင်းနည်းများနှင့် MXF ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ tools တွေနှစ်ဦးစလုံး၏ထိပ်တန်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, RTP, ပေါ်တူဂီရဲ့ဦးဆောင် TV နဲ့ရေဒီယိုအသံလွှင့်ကွန်ယက်၏ 1st 360ºဂီယာအတွက်ပါဝင်။ မေလ 1st, 2016 တွင်, RTP MOG ရဲ့360ºသည်မိုဃ်းတိမ်န်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု. ၎င်း၏အသစ်က "ပေါ်တူဂီရဲ့ Got Talent:" အစီအစဉ်ကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအခြေစိုက်က MS Windows နဲ့ MAC နှစ်ဦးစလုံးမှကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် ...
MOG စွမ်းအားဖြင့် "ပစ္စည်းလဲလှယ်ရေးစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ"
MOG Technologies က, ဗဟိုစားသုံးမိဖြေရှင်းနည်းများနှင့် MXF ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ tools တွေနှစ်ဦးစလုံးတစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းမကြာသေးမီက MXF ၏ဗားရှင်းအသစ် :: SDK ကို၎င်း၏ MXF ဆော့ဝဲဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Toolkit ကိုကြေညာခဲ့သည်။ MOG ရဲ့ MXF :: SDK ကို 2003 အတွက်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် MXF ၏ပထမဦးဆုံးစီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်အကောင်အထည်ဖော်မှုခဲ့ပါတယ်။ MXF :: SDK ကိုရိုးရှင်းတဲ့ application programming ကိုအသုံးပြုပြီး, အ MXF ပုံစံ၏အသေးစိတ်များနှင့်ရှုပ်ထွေးထံမှလျှောက်လွှာအလွှာ abstracts ...
Polsat mxfSPEEDRAIL နှင့်အတူ၎င်း၏စားသုံးမိပါစစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းစွာ
[မေလ, 2016, ပေါ်တူဂီ] - MOG Technologies က, ဗဟိုစားသုံးမိဖြေရှင်းနည်းများနှင့် MXF ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ tools တွေနှစ်ဦးစလုံးတွေအတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းယနေ့ Telewizja Polsat SP မှာယင်း၏ mxfSPEEDRAIL စနစ်များဖြန့်ကျက်ကြေညာခဲ့သည်။ z oo, ပိုလန်အတွက်အကြီးမားဆုံးကုန်းစီးပွားဖြစ်ထုတ်လွှင့်။ တစ်မ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရအတွက်, တီဗီ Polsat အလွယ်တကူ avid ပတ်ဝန်းကျင်သို့သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအပေါငျးတို့သသုံးစွဲနိုင်မယ့်လုံးဝအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါဖြေရှင်းချက်လိုအပ် ...
ဥရောပဖလားအတွက် MOG ရဲ့ mxfSPEEDRAIL ရမှတ်များ
ယနေ့Südwestrundfunk (SWR), ဂျာမဏီတွင်အကြီးဆုံးအသံလွှင့်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏တဦးတည်းအကျော်ကြားဆုံးတွေထဲကနှင့်ဂုဏ်သတင်း, အ 2016 ဥရောပဖလားကာလအတွင်းယင်း၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာမြှင့်တင်ရန် mxfSPEEDRAIL ကိုရွေးချယ်ထားပြီးကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် MOG Technologies က, MXF နှင့်ဗဟိုစားသုံးမိပါဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေး, ဘောလုံးချန်ပီယံ။ ဥရောပဘောလုံးပြက္ခဒိန်တွင်ထိုကဲ့သို့သောအရေးပါတဲ့အားကစားဖြစ်ရပ်ဖြစ်ခြင်း, ထုတ်လွှင့်သေချာဖို့လိုပါတယ် ...
ETV မြင်ကွင်းကျယ် MOG mxfSPEEDRAIL ရွေးကောက်
MOG ရဲ့ဖောက်သည် ETV, မြင်ကွင်းကျယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရုပ်သံလိုင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့် ETV ကွန်ယက်အုပ်စုကပိုင်ဆိုင်သည်။ ဒါဟာသတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးနှစ်ဦးစလုံးပို့တဆယ်ခုနစ်ဒေသဆိုင်ရာဘာသာစကားလိုင်းများပြေး။ channel များကိုတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးနှင့်အတူ, ETV အလွန်တိုင်းပြည်အနှံ့ဒေသတွင်းတီဗီပရိသတ်ကို၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Hyderabad, အိန္ဒိယ, ETV အခြေစိုက်, မြင်ကွင်းကျယ် 24 ×7ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးကိုကိုယ်စားပြုတယ် ...
mxfSPEEDRAIL နှင့် GRB - ရှည်တည်မြဲကြားဆက်ဆံရေး
[MOG LLC - နယူးယောက်, ဖေဖော်ဝါရီလ 2016] - MOG Technologies က, MXF နှင့်ဗဟိုစားသုံးမိပါဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေး, ယနေ့ GRB Entertainment ကအဖြစ်မှန်ပြပွဲထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရည်ညွှန်းထက်ပိုနှစ်နှစ်အဘို့မိမိတို့ထုတ်လုပ်မှု Workflows အတွင်း mxfSPEEDRAIL သုံးပြီးထားပြီးကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ။ ဤအချိန်အတောအတွင်း mxfSPEEDRAIL ရှိခြင်း, ထည့်သွင်းသည့်လုပ်ငန်းအသွားအလာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည် ...